အိမ် ငှား ကို ကို – Hlataw.com
ကျေ နာ် တက္ကသိုလ် စတက်တဲ့ နှစ်မှာ ပဲ ဖေဖေ ဆုံးသွားခဲ့တော့ ဘာအလုပ်အကိုင်မှ မလုပ်ဖူးတဲ့မေမေ နဲ့ ကျနော့်အတွက်တော့ ဒုက္ခ ကို လှလှ ကြီး တွေ့ရတော့တာပါပဲ ။ ဖေဖေ့ လစာ နဲ့ စားနေခဲ့တာ မို့ဖေဖေ ရုတ်တရက် ဆုံးပါးသွားတော့ စားဖို့သောက်ဖို့တောင် အနိုင်နိုင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ။
၂ လ ၃ လလောက်ထိ စုဆောင်းထားတာ လေး တွေ နဲ့ခြိုးခြံ စားသောက်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာ တခုခု မစီစဉ်လို့မရလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတော့ သားအမိနှစ်ယောက် ခေါင်းခြင်းရိုက်ပီးစင်းစား လို့ရတဲ့အဖြေ က လက်ရှိနေတဲ့အဘွားပေးခဲ့တဲ့ တိုက်ကို ရောင်းဖို့ပေါ့ ။
ဒီလို နဲ့ တိုက်ရောင်းပီး ရတဲ့ငွေလေး နဲ့ မဟာမြိုင်ထဲ ကို ပြောင်းခဲ့တော့တယ် ။အရင်နေဖူးတဲ့ရက်ကွက်လို ဆိတ်ငြိမ်ရက်ကွက်မဟုတ်ပဲ ကျောင်းနားနီးတာ မို့ လူသွားလူလာများလွန်းတာမို့ နေရခက်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုဘက်တိုက်ကြီးရောင်းခဲ့ရတဲ့ငွေ နဲ့ဝယ်တာမို့လက်ထဲ ငွေတော်တော်ချန်ထားပီးဝယ်တာတောင် ဒီဘက်မှာတော့ ခြံကျယ်ကျယ်လေး ရခဲ့တာမို့အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ် ။
မေမေ က စဉ်းစားပီး ခြံထဲမှာ အိမ်ကြီးကြီးလေး နံကပ်လေးဆောက်ပီး တဝက် ကို အငှားချ ခဲ့တယ်။ဝင်ငွေလေးရှိတော့ ဘဏ်တိုးလေးကလည်းရတာမို့အဆင်ပြေလာခဲ့တယ်။ တက္ကသိုလ် နားနီးတာမို့ ကျောင်းသားတချို့စုပေါင်း ပြီး အိမ်ခန်းငှားနေတာ မျိုးတွေရှိနေတာမို့ ကျနော့် တို့အိမ်လေး လည်း ဒီစီးပွားရေး နဲ့ အကျိုးပေးပါတယ်။ အဆောင်မဟုတ်ပဲ သီးသန့်စုနေချင်တဲ့သူတွေ စုနေတာမျိုး ပါ ။ ကျောင်းပိတ်ရာသီ ဆိုရင်တော့ အခန်းလွတ်နေတဲ့အခါမျိုး ကြုံတက်ပါတယ်။ လပေးနဲ့ပဲ မို့ လူပြောင်းလူလွဲ တော့များပါတယ်။
ဒီတခါ နွေ ရောက်တဲ့အခါ မှာတော့ ကျောင်းပိတ်ပြီး အခန်းငှားသူတွေ ပြန်သွားကြတဲ့အခါ အခန်းလွတ်နေတာ ၃ရက်လောက်ရှိပါပီ။ နေ့ခင်းဘက် ကျနော် အိပ်နေတုန်း အိမ်ရှေ့ကခေါ်သံကြားတော့ ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ အသားညိူညို အရပ် ခပ်ပြတ်ပြတ် နဲ့ အကိုကြီး တယောက်ပါ ။ အဲ့အချိန်က တော့ သူ့ကို ကြည့်ရတာ သာမန်ပါပဲ ။ လှတယ် မလှဘူး မသိဘူး ။ အခန်းငှားချင်လို့ဆိုလို့မေမေ နဲ့တွေ့ပေးလိုက်တယ် ။
ခနနေတော့ မေမေ က အခန်းတည့်သွားကြောင်း နှစ်လနေမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ် ထူးခြားတာ က တယောက်တည်းနေမှာတဲ့။ ကျနော် တို့ဆီမှာ ကျောင်းသားတွေ များတာမို့ ၃ ယောက် ၄ ယောက် ပေါင်းငှားတာမျိူုး သာ ရှိခဲ့တယ်လေ.။
တယောက်တည်း က ငှားနေတာမျိုး က ပထမဆုံးပါပဲ ။ သူ့က မော်လမြို င်က လို့သိရတယ်။ အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ မန်းလေးမှာ နှစ်လလောက်နေမယ် လို့ သိခဲ့ရတယ်။ လူနည်းတော့ ပြသာနာ နည်းတာမို့ မေမေ လည်း သဘောကျနေလေရဲ့ ။ …ကိုရာဇာ …. စတွေ့တုန်းကတော့ သာမန် လို့ထင်ပေမယ့် အတူနေရင်း နဲ့ခင်လာ ချိန်မှာတော့ သာမန်ထက် ဆွဲဆောင်မှု့ရှိတဲ့သူလို့မြင်လာခဲ့ရတယ်။ ရီလိုက်ရင် သွားလှလှလေးတွေ ပေါ်နေပီး ပါးချိမ့်လိုမျိုး ပါးပေါ်မှာ အရစ်အရစ်တွေ နဲ့ ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ ဗလ်လီ အမြောင်းထအောင် လှနေတဲ့ခန္ဒာကိုယ်မျိူုးမဟုတ်ပေမယ့် ရင်အုတ်ကားကား လက်မောင်းတုတ်တုတ် နဲ့ မဝတဲ့ခန္ဒာကိုယ် ပိုင်ရှင်ပါ။ အသားညိူု ပီး ကြည့်ကောင်းလွန်းပါတယ်။
အတူနေလာရင်း နဲ့သူ့ကို မြင်ရင် ရင်ခုန်သလို ရင်တုန်သလို ဘာဖြစ်မှန်းမသိ ကိုယ့်ဟာ ကို ဖြစ်နေတာ ကို ကျနော့်ထက် သူက အရင် ရိပ်မိလောက်အောင် ကျနော် အနေမတက်ခဲ့ပါဘူး။ သူလည်လွန်းတာ လည်း ပါတာပေါ့ဗျာ ။
…. ကျနော်တို့ဘက်အခြမ်းမှာ သီးသန့် ရေချိူုးခန်းပါပေမယ့် အရမ်းပူလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ အိမ်နောက်ဖေးကအများသုံး ရေချိူးကန်နားမှာ ရေသွားသွား ချိုးရင်း ကိုရာဇာ့ ကိုငေးကြည့်ရတာ ဖီလ်းတမျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ နဲ့ဆုံ ခဲ ပါတယ်။ ကျနော် စောင့်နေပေမယ့် သူ ထွက်မလာလို့ ကိုယ့်ဟာကို ပြန်ခဲ့ရတဲ့နေ့တွေ လည်း ခန ခန ပါပဲ ။ ဒီလို နဲ့တရက်တော့ …… မေမေ အပြင်သွားတာမို့ တအိမ်လုံးမှာ ကိုယ်တယောက်တည်းရယ်။
အဲ့အချိန် ကိုရာဇာ အပြင်က ပြန်လာတာ တွေ့လိုက်ရလို့ အရမ်းပျော်သွားတယ်။ သူခန နားပီးရင် ရေချိုးမှာပဲ လေ။ ကျနော်လည်းအဲ့ဒါနဲ ရေချိုးဖို့ပြင်ဆင်ပီး အိမ်နောက်ဖေး ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ မရှိမယ့်ရှိမယ့် အဝတ်အပေတွေ ကို ရှာ ကြံပီးထိုင်ဖွတ်နေလိုက်တယ်။ ကျနော် ထင်တာ မှန်ပါတယ် ၁၅မိနစ်လောက် စောင့်နေလိုက်တော့ ကိုရာဇာ တယောက် ခရုပုဆိုး ကိုတိုတိုဝတ်ပီး အကျီဗလာ နဲ့ထုံစံအတိုင်း ရောက်လာတယ်။ ကျနော့် ကို ပြုံးပြပီး ရေတွေ သူ့ကိုယ်ပေါ်လောင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ပုဆိုးက ကိုယ်မှာ လုံးဝကပ်သွားပြီး သူ့ကောက်ကြောင်းတွေ ပိုပေါ်လာတယ်။ ကိုရာဇာ့ဆီမှာ ကျနော် အနှစ်သက်ဆုံးနဲ့အမက်မောဆုံး မနာလို အဖြစ်ဆုံးကတော့ ယောက်ျားတန်မယ့် လှလွန်းတဲ့ တင်ပါး ကောက်ကောက်တွေ ပါပဲ ။
လုံးဝန်းပီး ကားပီး နှစ်ခု ကွဲကွဲလေး ဖြစ်နေတာက သူ ဘာဝတ်ဝတ်ကြည့်ကောင်းလွန်းတယ်။ အခုလည်းကြည့်လေ ရေအစို မှာ အရမ်း လှနေတော့ ကျနော် ခလေး တောင်နိုးလာတဲ့အထိပါပဲ ။ သူက သတိမထားမိလား မသိပေမယ့် ကျနော် ရေချိုးဖို့ထွက်လာပေမယ့် သူ သာ ရေချိုးပီးသွားတယ် ကျနော် သူ့ကိုငေးရင်း နဲ့ ရေမချိုးရသေးဘူး။ ဟီးး သူထွက်သွားတာ ကို ငေးကြည့်နေပီးမှ သတိဝင်လာလို့အမြန်ချိုးလိုက်ရတယ်။
ခပ်သွက်သွက် ရေချိူုး ပီး ကျနော့် အိမ်ဘက် ကို သွားမယ် လုပ်ရင်း နဲ့ ကိုရာဇာ့ အခန်းဘက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ အကျီ မဝတ်သေးပဲ အောက်ပိုင်းကိုတဘက်ပါတ်ပြီးကျနော့် ကို စိုက်ကြည့်နေတယ် ။ ကျနော့် ရင်ထဲ ဒိန်းခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ သူ့အကြည့်က ညို့နေသလို ပဲ ။
ဆက်သွားမရတော့ပဲ သူ့ကိုထပ် ထပ်ကြည့်ချင်နေတယ်။ ဒုတိယ အကြိမ်း အကြည့်မှာ ပြုံးပြတယ်။ တတိယ အကြိမ် ထပ်ကြည့်ချိန်မှာတော့ သူ့သွားလေးတွေ ပေါ်အောင်ရီ လိုက်ပြီး ကျနော့်ကိုလက်ယက်လှမ်းခေါ်တယ်။ အိမ်ဘက်ကိုလှမ်းမရတဲ့ခြေလှမ်းတွေ က သူ့ဆီတော့ သွက်လိုက်တာဗျာ….. ကျနော် အနားရောက်လာတော့ သူ ကလှည့် ပီး အိမ်ထဲ ဝင်သွားတယ်။ ကျနော် လည်း ဆက်လိုက်သွားတာပေါ့။ လူက အကျီကဗလာ နဲ့ ရေစို ပုဆိုးနဲ့။ တဗါတ်ခြုံထားပီး သူ့နောက်က လိုက်ကြည့်တော့ အိမ်ခန်းပေါက်မှာ စောင့်နေတယ်။
ကျနော်လည်း အနားရောက်ရော ကျနော့်ကိုဇတ်ခနဲ့ သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းပြီး ကျနော့်တဘက်ကို ဖယ်ပီး လွှင့်ပလိုက်တယ်။ ကျနော့်လည်ပင်းတွေနဲ့နို့တွေကို သူ့လျှာတွေ နဲ့ ယှက်တယ်။ နှစ်ခမ်းနှစ်လွှာ ကိုဖိစုတ်ရင်း သူ့လျှာတွေ နဲ့ကျနော့်လျှာတွေ ကို ပွတ်သတ်ပေးတယ်။ မျက်နှာပေါ်က မုတ်ဆိတ်မွှေးစူးစုးတွေက အသားဖြူတဲ့ကျနော့် လည်ပင်းတွေ ရဲတက်သွားစေပါတယ်။
နို့တွေ ကို ခြေရင်းစုတ်ရင်းကနေ ကျနော့်ချက်လေးဆီကို သူ့လျှာတွေ ရောက်သွားတယ်။ အဲ့နောက်တော့ ကျနော့် ရေစိုနေတဲ့ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်ပီး အစွမ်းကုန် တောင်နေတဲ့ ကျနော့် ခလေးကို ဗြွတ်ခနဲ့စုတ်ပလိုက်တယ်။ အိုးးးး အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ ။ သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူတွေက အိစက်နေတာပါပဲ ။ အရင်က အမြင်တွေ သာ ရှိပေမယ့် လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံ မရှိဖူးသေးတော့ ခံစားလိုက်ရတဲ့ဖီးလ်က လူကို မိုးပေါ်ရောက်သွားစေသလိုပဲ ။ လျှာနဲ့သိုင်းသိုင်းရစ်ပီး လီးလျှောက်ကို ပွတ်ပေးနေတာ အဲ့အချိန်မှာပဲ သူ့လက်တွေ က ကျနော့်တင်ပါး ကို အားရပါးရခြေနေပါတယ်။ ကျနော်က ဖင်အကြီးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် သူ ကိုင်နေပုံ က အရသာ တော်တော်ရှိတယ်ဗျာ။
လီးစုတ်ပေးရင်း ကနေ သူ့လျှာတွေ ကိုနေရာ ပြောင်းလိုက်တယ်။ ကျနော့်ကို နည်းနည်းကုန်းပေးဆိုပီး ဖင်ကြားတလျှာက်ကို လျှာ နဲ့ပက်ပက်စက်စက်ရက်ပါတော့တယ်။စအိုဝလေး ကို လျှာနဲ့ထိုးထိုးပေးတာက ခံလို့အကောင်းဆုံးပါပဲ ။ ကျနော့် အသားတွေ ဆက်ဆက်တုန်လာအောင်ကောင်းလာတယ် ထိန်းလို့မရတော့ပဲ ကျနော့် လရေ တွေ တဗျစ်ဗျစ် ထွက်ကုန်တယ်။ ပုဆိုးပေါ် မှာအပုံလိုက်လေး ဖြစ်နေတဲ့ကျနော့်လရေတွေ ကို သူ့လက်နဲ့ကော်ယူလိုက်ပီး ကျနော့် ဖင်ပေါက်မှာ သုတ်ပေးရင်း ကျနော့် စအို ကိုနှိုက်ပါတော့တယ်။ အဲ့အချိန်မှာပဲ သူ့တဘတ်ကို သူ့လက်နဲ့ဆွဲချွတ်ရင်း ကျနော့် ခေါင်းကို သူ့လီး နား ကပ်ပေးပါတယ်။
အိုးးးး လီးက အကြိးဂျီးပါ။ အနည်းဆုံး ၆ခွဲ ကျော်မယ်ထင်ပါတယ် လုံးပါတ်တုတ်နေတာကလည်း သိသာလွန်းနေပါတယ်။ အသားညိုသူမို့လား မြှာပွေသူမို့လား မသိဘူး လီးကြီးက မဲပီးအကြောပြိုင်းပြိုင်းထနေတယ်။ အရမ်းရင်ခုန်သွားတယ်။ ကျနော့် အစွမ်းကုန် စုတ်ပေးလိုက်တယ်။ နွေးပီး အိနေတာ မို့စုတ်ရတာ အရသာ ရှိလွန်းတယ်။ ပြောမပြတက်တဲ့အရသာရှိလွန်းတဲ့ ရာဘာချောင်းကြီးပါပဲ ။ စအို ကိုလက်နဲ့နှိုက်နေတော့ လီးစုတ်ရတာ ပိုဖီးလ်တက်နေတယ်လေ။ ကျနော် အစွမ်းကုန် စုတ်ပေးနေပေမယ့် သူ က အားမရသလိုနဲ့ ကျနော့် ဆံပင်တွေ ကို စုစည်းကိုင်လိုက်ပီး ပါးစပ်ထဲကို အဆုံးထိဆောင့်လိုးပါတော့တယ်။ အာခေါင်ထိ နင့် ခနဲ့ နင့်ခနဲ့ဝင်တာမို့ ပျို တက်လာတဲ့အထိပါပဲ ။
ပါးစပ် ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်တိုင် တံတွေးတွေ ရွဲနစ်နေတဲ့လီးကြီးကကြောက်စရာတောင်ကောင်းပါတယ်။ အဲ့လို လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ရင်း ကျနော့်ဖင်ပေါက်ကိုတေ့ပါတော့တယ်။ အကိုကွိုင်စွတ်အုံးလေ လို့ပြောတော့ ဘာမှ မပြောပဲ အလွတ်ကို ဗြွတ်ခနဲ့သွင်းချလိုက်ပါတယ်။
အားးး ဖင်ပေါက်နဲ့လီးနဲ့အလွတ်တွေ့လိုက်ရတဲ့အရသာက ရက်စက်ပါတယ်။ ကျနော့် လရေတွေ နဲ့ဆွထားတာရယ်ကြောင့် ရယ် တံတွေးတွေ ရွဲနေတာရယ် ကြောင့်ရယ် တဗြစ်ဗြစ်နဲ့တိုးဝင်သွားပေမယ့် မနာပဲ အရမ်းမိုက်နေတယ်။ ကျနော်လည်း ဖင်ကို ကော့ပေးထားရင် သူ လုပ်သမျှ ခံစားနေလိုက်တော့တယ်။ အကို အကိုလို့တတွက်တွက် အော်ရင် သူ့ချစ်သမျှ ကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ပျော်နေလိုက်တယ်။
ကျနော့် ပခုံးကို ချိူုင်းအောက်ကနေ သိုင်းကိုင်ပီး စပါယ်ရှယ် ဆောင့်ပါတယ်။ ကောင်းလား ချာတိတ် လို့လည်းခန ခန မေးတယ်။ မင်း ဖင်ခံချင်နေတာ ဒါမျိုးမလား လို့ မေးပြီး လီးကို အဆုံးထိ ဆောင့်ပါတယ်။ လေးဘက်ထောက်ပေးထားတဲ့ကျနော့် ကို ဆံပင်ဆွဲပီး တအားဆောင့်တော့ သူလည်းဖီးလ် တအားတက်နေပီလေ။ သိပ်မကြာတော့ပဲ ကျနော့် ဖင်ထဲမှာ သူ့အရေနွေးနွေးတွေ ကို တဗျစ်ဗျစ်နဲ့ပန်းထုတ်ချလိုက်တော့တယ်။
.. သူတော်တော်မောသွားပုံနဲ့ ကုတင်ပေါ်အိပ်နေတော့ ကျနော်လည်းသူ့ရင်ဘတ်ပေါ်ခေါင်းတင်ပီး မှေးနေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျနော် ကိုရာဇာ့ ကို ချစ်တယ် လို့ပြောလိုက်တယ်။ သူက အင်း ညီချစ်နေတာ သိနေတာကြာပီတဲ့။
ကိုလည်း ဒီနေ့မှ ချစ်ချင်လာလို့တဲ့။ သူက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနေတော့ ကျနော်လည်း အကိုဘယ်လိုသိတာလဲ လို့မေးတော့ ညီ့အကြည့်တွေက အကို့ပေါင်ကြားမှာ အမြဲရှိနေတာကိုးတဲ့။ အားးးး ရှက်တာဗျာ ။ ကျနော် ရှက်သွားတာကိုသိတော့ မရှက်ပါနဲ့တဲ့။ အကို ခန ခန လိုးမယ်နော် တဲ့။ အာဗျာ ။ ကြည်နူးတာလိုလို ဘာလိုလို ကြီးပါဗျာ။ ကျနော်လည်း ပြောမှ ပိုဆိုးလာတာမို့ သူ့ရင်ဘက် ကို ဗုန်းခနဲ့ထုပီး အမြန်ဆုံးလစ်ထွက်ခဲ့တော့တယ်။ ။ ။ သူကတော့ တဟား ဟား နဲ့အသံထွက်အောင်ရီရင် ကျန်နေခဲ့တော့တယ်။ ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
လိ မ္မာ လိုက် တဲ့ နော် မူ လေး